पहुँचवालालाई फेरि बाँडियो १ करोड ३२ लाख — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अन्य > पहुँचवालालाई फेरि बाँडियो १ करोड ३२ लाख
पहुँचवालालाई फेरि बाँडियो १ करोड ३२ लाख
काठमाण्डौं । सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषबाट एकै दिन एक करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा २६ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७८ जनालाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा सागर पण्डितले लेखेका छन्।
आर्थिक सहायता पाउनेमा विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ता धेरै छन्। संवैधानिक निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि आर्थिक सहायता पाएका छन्। निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई तीन लाख दिइएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई, एमाले नेता सोमनाथ अधिकारी, माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही र पूर्वसांसद गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको छ। माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य जीवनकुमार गौतमलाई एक लाख रुपैयाँ दिइएको छ।
राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्र सरकारबाट आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन् । गरिब, विपन्न, अशक्त र पहुँच नभएका केही अधिकांश नागरिकले भने उपचार खर्चसमेत पाउँदैनन् । नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिविपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पहुँच हुनेलाई लाखौँ रकम बाँड्दै आएको छ । तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले कार्यविधि अनुुसार नै सहायता वितरण भएको दाबी गरे ।
गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा मात्रै आर्थिक सहायतास्वरुप दुई सय ७२ जनालाई १५ करोड ५४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । यस्तो सहायता लिनेमा बढी दलका नेता तथा कार्यकर्ता नै छन् । गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले के–कस्ताले आर्थिक सहायता पाए भन्नेबारे आफूले अध्ययन नगरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को १३ जेठमा बसेको बैठकले पनि ३१ जनालाई ८५ लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । डेढ महिनामै मन्त्रिपरिषद्ले फेरि ७८ जनालाई एक करोड ३२ लाख वितरण गरेको छ । किन रकम दिइएको हो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।
प्रकाशितः २०७३ साउन १६
२०७३ साउन १६ गते १०:०३ मा प्रकाशित
अब विदेशमा घरेलु कामदारको न्यूनतम तलब ३० हजार
सेयर बेचेको पैसा तीन दिनमा पाउनुभएन ? ५०००१०२ मा भन्नुहोस्
चुनावी चहलपहल यसरी बढ्यो
१९ प्रकारका कृषिजन्य उत्पादन सहित धनकुटामा प्रादेशिक व्यापार तथा कृषि मेला हुने
एनआईसी र द्वारिकाज ग्रूपबीच छूट सम्झौता
लघुवित्तले लगानीकर्तालाई ल्याए खुशीको बहार, ४० र ६० प्रतिशत बोनस सेयर १२.७ र २० प्रतिशत नगद लाभांश !
पुनःनिर्माणमा पुनःस्थापनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न थप रु छ खर्ब लाग्ने
ईमेल : arth[email protected]